इन्फिनिटी लघुवित्तको नाफा ६६.७६ % बढ्यो - Aathikbazarnews.com Aathikbazarnews.com इन्फिनिटी लघुवित्तको नाफा ६६.७६ % बढ्यो - Aathikbazarnews.com
इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा गत वर्षभन्दा ६६ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढी नाफा कमाएको छ ।
त्रैमासिक वित्तीय विवरण आइतवार सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले यस वर्ष रू. ३ करोड ६५ लाख ८० हजार खुद नाफा गरेको हो । यो नाफा गत वर्षको त्रैमासिक अवधिसम्म रू. २ करोड १९ लाख ३६ हजार थियो ।
गत वर्षको जेठमा सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गरेको उक्त कम्पनीको चुक्तापूँजी हाल रू. २२ करोड ८१ लाख ४० हजार छ । यस वर्ष कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको छ ।
कम्पनीको जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा १५१ प्रतिशत बढी अर्थात् रू. ६ करोड ८२ लाख २२ हजार कायम छ । यस वर्ष रू. १ अर्ब ५ करोड ३६ लाख विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सापट लिएको उक्त कम्पनीले गत वर्षभन्दा करीब ४५ प्रतिशत बढी अर्थात् रू. १ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ६६ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
उक्त कम्पनीले निक्षेप संकलन भने गत वर्षभन्दा यस वर्ष ४० दशमलव ७९ प्रतिशत बढी अर्थात् रू. ६४ करोड ३१ लाख २ हजार गरेको छ । गत वर्ष १ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रहेको उक्त कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा यस वर्ष २ दशमलव ६९ प्रतिशत पुगेको छ ।
कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. २१ दशमलव ३८ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १२९ दशमलव ९० छ ।
अजय श्रेष्ठ र बोहोरालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश